Oday 82 jir ah oo maanta dil toogasho ah lagu fuliyay degmada Awdheegle ee gobolka Sh/hoose - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Oday 82 jir ah oo maanta dil toogasho ah lagu fuliyay degmada Awdheegle ee gobolka Sh/hoose
Wararka naga soo gaaraya degmada Awdheegle ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in Xarakada Al-shabaab ay galabtii maanta halkaasi dil toogasho ah ku fuliyeen oday waayeel ah oo da’diisa lagu sheegay inay ahayd 82 sano jir.
Odaygaasi la dilay oo lagu magacaabi jiray Cismaan Diini Cali ayaa lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa ergadii dhawaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay u tagtay doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Maxkamada Al-shabaab ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegtay in Oday Cismaan Diini Cali lagu soo eedeeyay inuu dhawaan wax kasoo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee lagu soo doortay magaalada Baydhabo, isagane uu qirtay dambigii lagu soo eedeeyay.
Dilka toogashada ah ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay meel fagaare ah oo ku yaalla degmada Awdheegle, halkaas oo ay usoo daawasho tageen dadweyne aad u badan.
Xarakada Al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeysay kordhiyay ugaarsiga ay ku haayaan ergadii dhawaan ka qeyb qaadatay soo xullista xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.